Type G - 207 SQ-M / 2227 SQ-FT HILLTOP VISTA CONDOMINIUM | ရောင်းရန် | ကွန်ဒို | 0.00 သိန်း | ShweProperty
အသင်းဝင်လုပ်ရန် New Developments(ကြိုပွိုင့်)
သတင်း နှင့် အထူးဆောင်းပါးများ
ရောင်းရန် - ကွန်ဒို - Type G - 207 SQ-M / 2227 SQ-FT HILLTOP VISTA CONDOMINIUM
Min Ye Kyaw Swar Road
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Listed on 18 November 2015 | Ask for price ဧရိယာ: 2227 sqft
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဧရိယာ: 2227 sqft
Ask for price 4
အိမ်ခြံမြေ အမည် :
Type G - 207 SQ-M / 2227 SQ-FT HILLTOP VISTA CONDOMINIUM
မြို့ ၊ မြို့နယ် :
Ask for price ဧရိယာ :
Ask for price Listed on :
Master Bedroom Own Meter Generator PABX Telephone Exchange System Swimming Pool Gymnasium Carparking Play Ground Pile Foundation Own motor Power and lighting Line CCTV Security System CATV Security door lock system Fire alarm system Direct phone Line point PABX telephone system Full back up generator Function room အနီးအနားထင်ရှားသည့်နေရာများ
Junction Mawtin, Central Woman Hospital, Chinese Emabassy, Taw Win Center, မှတ်ချက်
Condominium - The Quality of life
Hilltop Vista is designed to capitalize of its elevated Location and Surroundings. Fromasuperiorasuperior point, experience spectacular views of Yangon city skyline, the majestic Shwedagon Pagoda as well as geneous greenery in and around Hilltop Vista.
Hilltop vista's architectural design reflects its quiet elegance and discreet luxury amidst an exclusive and private lush environment. Each residence is crafted to meet the most discerning astes Spacious, generously proportioned interiors and ample windows crestealight, airy and relaxing ambience for all residences.
Project Detail HILLTOP VISTA CONDOMINIUM
Shwe Taung Development Co.,Ltd.
ဆက်သွယ်ရန် Shwe Taung
Ahlone Tower, Ground Floor, Strand Road, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.
1,800.00 USD ဧရိယာ1650 sqft
2,500.00 USD ဧရိယာ1760 sqft
4,500.00 USD ဧရိယာ2185 sqft
15.00 သိန်း ဧရိယာ1566 sqft
50.00 သိန်း ဧရိယာ1250 sqft
55.00 သိန်း ဧရိယာ900 sqft
150.00 သိန်း ဧရိယာ1320 sqft
22.00 သိန်း ဧရိယာ1700 sqft
10.00 သိန်း ဧရိယာ1250 sqft
30.00 သိန်း ဧရိယာ4900 sqft
55.00 သိန်း ဧရိယာ1250 sqft
3,500.00 USD ဧရိယာ2100 sqft
ငှားရန် Commercial Expat Homes
အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား တိုက်ခန်း
အနည်းဆုံး အိပ်ခန်း အနည်းဆုံး အိပ်ခန်း
အများဆုံး အိပ်ခန်း အများဆုံး အိပ်ခန်း 1 bedrooms
ပိုင်ဆိုင်မှု့ ပိုင်ဆိုင်မှု့ စာချုပ်
အနည်းဆုံး အကျယ်အဝန်း အများဆုံး အကျယ်အဝန်း အနည်းဆုံး အိပ်ခန်း အနည်းဆုံး အိပ်ခန်း
စပြီးရှာရန် ရောင်း / ဝယ်
ငှားရန် အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်း
ငှားရန် အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား တိုက်ခန်း
တိုင်း၊ပြည်နယ်: မြို့ ၊ မြို့နယ်
စပြီးရှာရန် ဆက်သွယ်ရန် Shwe Taung
အီးမေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်ရန် အမည်
ရောင်းရန် ကွန်ဒို အလုံ ကို စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ဒီအိမ်ခြံမြေ နှင့်ပါတ်သတ်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ပေးပို့ စေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Enter the Captcha
Please send me latest news, update special offers. Call Phone
အီးမေးပို့ပြီး ဆက်သွယ်ရန် အမည်*
Please send me latest news, update special offers. Thank you.
ကြော်ငြာ ပိုင်ရှင် ကို ဆက်သွယ်ရန်
ဖုန်းခေါ်ဆိုသောအခါ အဆင်ပြေစေရန် အတွက် ShweProperty.com တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပေးပါရန်
Advertiser : Shwe Taung
အလုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး Asking Price : Ask for price
Phone no: 01-2300077, 01-2300078
ဆိုင်ခန်း / ရုံးခန်း Serviced Apartment အရင်းအမြစ်
အကျိုးဆောင်များ	Art of Living သတင်း
Copyright © 2011-2017 ShweProperty.com. All rights reserved.
SignUp and never miss an Opportunity again
Please Enter your details Sorry, your e-mail looks typed in-correct.
၀ယ်ရန် / ငှားရန်
ငှားရန် အိမ်ခြံမြေအမျိုးအစား တိုက်ခန်း
မြို့ နယ်အားလုံး ရှာရန်
1 သိန်း2သိန်3းသိန်း4သိန်း5သိန်6းသိန်း7သိန်း 8 သိန်း9သိန်း 10 သိန်း 11 သိန်း 12 သိန်း 13 သိန်း 14 သိန်း 15 သိန်း 16 သိန်း 17 သိန်း 18 သိန်း 19 သိန်း 20 သိန်း 21 သိန်း 22 သိန်း 23 သိန်း 24 သိန်း 25 သိန်း 26 သိန်း 27 သိန်း 28 သိန်း 29 သိန်း 30 သိန်း 31 သိန်း 32 သိန်း 33 သိန်း 34 သိန်း 35 သိန်း 36 သိန်း 37 သိန်း 38 သိန်း 39 သိန်း 40 သိန်း 41 သိန်း 42 သိန်း 43 သိန်း 44 သိန်း 45 သိန်း 46 သိန်း 47 သိန်း 48 သိန်း 49 သိန်း 50 သိန်း 51 သိန်း 52 သိန်း 53 သိန်း 54 သိန်း 55 သိန်း 56 သိန်း 57 သိန်း 58 သိန်း 59 သိန်း 60 သိန်း 61 သိန်း 62 သိန်း 63 သိန်း 64 သိန်း 65 သိန်း 66 သိန်း 67 သိန်း 68 သိန်း 69 သိန်း 70 သိန်း 71 သိန်း 72 သိန်း 73 သိန်း 74 သိန်း 75 သိန်း 76 သိန်း 77 သိန်း 78 သိန်း 79 သိန်း 80 သိန်း 81 သိန်း 82 သိန်း 83 သိန်း 84 သိန်း 85 သိန်း 86 သိန်း 87 သိန်း 88 သိန်း 89 သိန်း 90 သိန်း 91 သိန်း 92 သိန်း 93 သိန်း 94 သိန်း 95 သိန်း 96 သိန်း 97 သိန်း 98 သိန်း 99 သိန်း 100 သိန်း 101 သိန်း 102 သိန်း 103 သိန်း 104 သိန်း 105 သိန်း 106 သိန်း 107 သိန်း 108 သိန်း 109 သိန်း 110 သိန်း 111 သိန်း 112 သိန်း 113 သိန်း 114 သိန်း 115 သိန်း 116 သိန်း 117 သိန်း 118 သိန်း 119 သိန်း 120 သိန်း 121 သိန်း 122 သိန်း 123 သိန်း 124 သိန်း 125 သိန်း 126 သိန်း 127 သိန်း 128 သိန်း 129 သိန်း 130 သိန်း 131 သိန်း 132 သိန်း 133 သိန်း 134 သိန်း 135 သိန်း 136 သိန်း 137 သိန်း 138 သိန်း 139 သိန်း 140 သိန်း 141 သိန်း 142 သိန်း 143 သိန်း 144 သိန်း 145 သိန်း 146 သိန်း 147 သိန်း 148 သိန်း 149 သိန်း 150 သိန်း 151 သိန်း 152 သိန်း 153 သိန်း 154 သိန်း 155 သိန်း 156 သိန်း 157 သိန်း 158 သိန်း 159 သိန်း 160 သိန်း 161 သိန်း 162 သိန်း 163 သိန်း 164 သိန်း 165 သိန်း 166 သိန်း 167 သိန်း 168 သိန်း 169 သိန်း 170 သိန်း 171 သိန်း 172 သိန်း 173 သိန်း 174 သိန်း 175 သိန်း 176 သိန်း 177 သိန်း 178 သိန်း 179 သိန်း 180 သိန်း 181 သိန်း 182 သိန်း 183 သိန်း 184 သိန်း 185 သိန်း 186 သိန်း 187 သိန်း 188 သိန်း 189 သိန်း 190 သိန်း 191 သိန်း 192 သိန်း 193 သိန်း 194 သိန်း 195 သိန်း 196 သိန်း 197 သိန်း 198 သိန်း 199 သိန်း 200 သိန်း 201 သိန်း 202 သိန်း 203 သိန်း 204 သိန်း 205 သိန်း 206 သိန်း 207 သိန်း 208 သိန်း 209 သိန်း 210 သိန်း 211 သိန်း 212 သိန်း 213 သိန်း 214 သိန်း 215 သိန်း 216 သိန်း 217 သိန်း 218 သိန်း 219 သိန်း 220 သိန်း 221 သိန်း 222 သိန်း 223 သိန်း 224 သိန်း 225 သိန်း 226 သိန်း 227 သိန်း 228 သိန်း 229 သိန်း 230 သိန်း 231 သိန်း 232 သိန်း 233 သိန်း 234 သိန်း 235 သိန်း 236 သိန်း 237 သိန်း 238 သိန်း 239 သိန်း 240 သိန်း 241 သိန်း 242 သိန်း 243 သိန်း 244 သိန်း 245 သိန်း 246 သိန်း 247 သိန်း 248 သိန်း 249 သိန်း 250 သိန်း 251 သိန်း 252 သိန်း 253 သိန်း 254 သိန်း 255 သိန်း 256 သိန်း 257 သိန်း 258 သိန်း 259 သိန်း 260 သိန်း 261 သိန်း 262 သိန်း 263 သိန်း 264 သိန်း 265 သိန်း 266 သိန်း 267 သိန်း 268 သိန်း 269 သိန်း 270 သိန်း 271 သိန်း 272 သိန်း 273 သိန်း 274 သိန်း 275 သိန်း 276 သိန်း 277 သိန်း 278 သိန်း 279 သိန်း 280 သိန်း 281 သိန်း 282 သိန်း 283 သိန်း 284 သိန်း 285 သိန်း 286 သိန်း 287 သိန်း 288 သိန်း 289 သိန်း 290 သိန်း 291 သိန်း 292 သိန်း 293 သိန်း 294 သိန်း 295 သိန်း 296 သိန်း 297 သိန်း 298 သိန်း 299 သိန်း 300 သိန်း 301 သိန်း 302 သိန်း 303 သိန်း 304 သိန်း 305 သိန်း 306 သိန်း 307 သိန်း 308 သိန်း 309 သိန်း 310 သိန်း 311 သိန်း 312 သိန်း 313 သိန်း 314 သိန်း 315 သိန်း 316 သိန်း 317 သိန်း 318 သိန်း 319 သိန်း 320 သိန်း 321 သိန်း 322 သိန်း 323 သိန်း 324 သိန်း 325 သိန်း 326 သိန်း 327 သိန်း 328 သိန်း 329 သိန်း 330 သိန်း 331 သိန်း 332 သိန်း 333 သိန်း 334 သိန်း 335 သိန်း 336 သိန်း 337 သိန်း 338 သိန်း 339 သိန်း 340 သိန်း 341 သိန်း 342 သိန်း 343 သိန်း 344 သိန်း 345 သိန်း 346 သိန်း 347 သိန်း 348 သိန်း 349 သိန်း 350 သိန်း 351 သိန်း 352 သိန်း 353 သိန်း 354 သိန်း 355 သိန်း 356 သိန်း 357 သိန်း 358 သိန်း 359 သိန်း 360 သိန်း 361 သိန်း 362 သိန်း 363 သိန်း 364 သိန်း 365 သိန်း 366 သိန်း 367 သိန်း 368 သိန်း 369 သိန်း 370 သိန်း 371 သိန်း 372 သိန်း 373 သိန်း 374 သိန်း 375 သိန်း 376 သိန်း 377 သိန်း 378 သိန်း 379 သိန်း 380 သိန်း 381 သိန်း 382 သိန်း 383 သိန်း 384 သိန်း 385 သိန်း 386 သိန်း 387 သိန်း 388 သိန်း 389 သိန်း 390 သိန်း 391 သိန်း 392 သိန်း 393 သိန်း 394 သိန်း 395 သိန်း 396 သိန်း 397 သိန်း 398 သိန်း 399 သိန်း 400 သိန်း 401 သိန်း 402 သိန်း 403 သိန်း 404 သိန်း 405 သိန်း 406 သိန်း 407 သိန်း 408 သိန်း 409 သိန်း 410 သိန်း 411 သိန်း 412 သိန်း 413 သိန်း 414 သိန်း 415 သိန်း 416 သိန်း 417 သိန်း 418 သိန်း 419 သိန်း 420 သိန်း 421 သိန်း 422 သိန်း 423 သိန်း 424 သိန်း 425 သိန်း 426 သိန်း 427 သိန်း 428 သိန်း 429 သိန်း 430 သိန်း 431 သိန်း 432 သိန်း 433 သိန်း 434 သိန်း 435 သိန်း 436 သိန်း 437 သိန်း 438 သိန်း 439 သိန်း 440 သိန်း 441 သိန်း 442 သိန်း 443 သိန်း 444 သိန်း 445 သိန်း 446 သိန်း 447 သိန်း 448 သိန်း 449 သိန်း 450 သိန်း 451 သိန်း 452 သိန်း 453 သိန်း 454 သိန်း 455 သိန်း 456 သိန်း 457 သိန်း 458 သိန်း 459 သိန်း 460 သိန်း 461 သိန်း 462 သိန်း 463 သိန်း 464 သိန်း 465 သိန်း 466 သိန်း 467 သိန်း 468 သိန်း 469 သိန်း 470 သိန်း 471 သိန်း 472 သိန်း 473 သိန်း 474 သိန်း 475 သိန်း 476 သိန်း 477 သိန်း 478 သိန်း 479 သိန်း 480 သိန်း 481 သိန်း 482 သိန်း 483 သိန်း 484 သိန်း 485 သိန်း 486 သိန်း 487 သိန်း 488 သိန်း 489 သိန်း 490 သိန်း 491 သိန်း 492 သိန်း 493 သိန်း 494 သိန်း 495 သိန်း 496 သိန်း 497 သိန်း 498 သိန်း 499 သိန်း 500 သိန်း 501 သိန်း 502 သိန်း 503 သိန်း 504 သိန်း 505 သိန်း 506 သိန်း 507 သိန်း 508 သိန်း 509 သိန်း 510 သိန်း 511 သိန်း 512 သိန်း 513 သိန်း 514 သိန်း 515 သိန်း 516 သိန်း 517 သိန်း 518 သိန်း 519 သိန်း 520 သိန်း 521 သိန်း 522 သိန်း 523 သိန်း 524 သိန်း 525 သိန်း 526 သိန်း 527 သိန်း 528 သိန်း 529 သိန်း 530 သိန်း 531 သိန်း 532 သိန်း 533 သိန်း 534 သိန်း 535 သိန်း 536 သိန်း 537 သိန်း 538 သိန်း 539 သိန်း 540 သိန်း 541 သိန်း 542 သိန်း 543 သိန်း 544 သိန်း 545 သိန်း 546 သိန်း 547 သိန်း 548 သိန်း 549 သိန်း 550 သိန်း 551 သိန်း 552 သိန်း 553 သိန်း 554 သိန်း 555 သိန်း 556 သိန်း 557 သိန်း 558 သိန်း 559 သိန်း 560 သိန်း 561 သိန်း 562 သိန်း 563 သိန်း 564 သိန်း 565 သိန်း 566 သိန်း 567 သိန်း 568 သိန်း 569 သိန်း 570 သိန်း 571 သိန်း 572 သိန်း 573 သိန်း 574 သိန်း 575 သိန်း 576 သိန်း 577 သိန်း 578 သိန်း 579 သိန်း 580 သိန်း 581 သိန်း 582 သိန်း 583 သိန်း 584 သိန်း 585 သိန်း 586 သိန်း 587 သိန်း 588 သိန်း 589 သိန်း 590 သိန်း 591 သိန်း 592 သိန်း 593 သိန်း 594 သိန်း 595 သိန်း 596 သိန်း 597 သိန်း 598 သိန်း 599 သိန်း 600 သိန်း 601 သိန်း 602 သိန်း 603 သိန်း 604 သိန်း 605 သိန်း 606 သိန်း 607 သိန်း 608 သိန်း 609 သိန်း 610 သိန်း 611 သိန်း 612 သိန်း 613 သိန်း 614 သိန်း 615 သိန်း 616 သိန်း 617 သိန်း 618 သိန်း 619 သိန်း 620 သိန်း 621 သိန်း 622 သိန်း 623 သိန်း 624 သိန်း 625 သိန်း 626 သိန်း 627 သိန်း 628 သိန်း 629 သိန်း 630 သိန်း 631 သိန်း 632 သိန်း 633 သိန်း 634 သိန်း 635 သိန်း 636 သိန်း 637 သိန်း 638 သိန်း 639 သိန်း 640 သိန်း 641 သိန်း 642 သိန်း 643 သိန်း 644 သိန်း 645 သိန်း 646 သိန်း 647 သိန်း 648 သိန်း 649 သိန်း 650 သိန်း 651 သိန်း 652 သိန်း 653 သိန်း 654 သိန်း 655 သိန်း 656 သိန်း 657 သိန်း 658 သိန်း 659 သိန်း 660 သိန်း 661 သိန်း 662 သိန်း 663 သိန်း 664 သိန်း 665 သိန်း 666 သိန်း 667 သိန်း 668 သိန်း 669 သိန်း 670 သိန်း 671 သိန်း 672 သိန်း 673 သိန်း 674 သိန်း 675 သိန်း 676 သိန်း 677 သိန်း 678 သိန်း 679 သိန်း 680 သိန်း 681 သိန်း 682 သိန်း 683 သိန်း 684 သိန်း 685 သိန်း 686 သိန်း 687 သိန်း 688 သိန်း 689 သိန်း 690 သိန်း 691 သိန်း 692 သိန်း 693 သိန်း 694 သိန်း 695 သိန်း 696 သိန်း 697 သိန်း 698 သိန်း 699 သိန်း 700 သိန်း 701 သိန်း 702 သိန်း 703 သိန်း 704 သိန်း 705 သိန်း 706 သိန်း 707 သိန်း 708 သိန်း 709 သိန်း 710 သိန်း 711 သိန်း 712 သိန်း 713 သိန်း 714 သိန်း 715 သိန်း 716 သိန်း 717 သိန်း 718 သိန်း 719 သိန်း 720 သိန်း 721 သိန်း 722 သိန်း 723 သိန်း 724 သိန်း 725 သိန်း 726 သိန်း 727 သိန်း 728 သိန်း 729 သိန်း 730 သိန်း 731 သိန်း 732 သိန်း 733 သိန်း 734 သိန်း 735 သိန်း 736 သိန်း 737 သိန်း 738 သိန်း 739 သိန်း 740 သိန်း 741 သိန်း 742 သိန်း 743 သိန်း 744 သိန်း 745 သိန်း 746 သိန်း 747 သိန်း 748 သိန်း 749 သိန်း 750 သိန်း 751 သိန်း 752 သိန်း 753 သိန်း 754 သိန်း 755 သိန်း 756 သိန်း 757 သိန်း 758 သိန်း 759 သိန်း 760 သိန်း 761 သိန်း 762 သိန်း 763 သိန်း 764 သိန်း 765 သိန်း 766 သိန်း 767 သိန်း 768 သိန်း 769 သိန်း 770 သိန်း 771 သိန်း 772 သိန်း 773 သိန်း 774 သိန်း 775 သိန်း 776 သိန်း 777 သိန်း 778 သိန်း 779 သိန်း 780 သိန်း 781 သိန်း 782 သိန်း 783 သိန်း 784 သိန်း 785 သိန်း 786 သိန်း 787 သိန်း 788 သိန်း 789 သိန်း 790 သိန်း 791 သိန်း 792 သိန်း 793 သိန်း 794 သိန်း 795 သိန်း 796 သိန်း 797 သိန်း 798 သိန်း 799 သိန်း 800 သိန်း 801 သိန်း 802 သိန်း 803 သိန်း 804 သိန်း 805 သိန်း 806 သိန်း 807 သိန်း 808 သိန်း 809 သိန်း 810 သိန်း 811 သိန်း 812 သိန်း 813 သိန်း 814 သိန်း 815 သိန်း 816 သိန်း 817 သိန်း 818 သိန်း 819 သိန်း 820 သိန်း 821 သိန်း 822 သိန်း 823 သိန်း 824 သိန်း 825 သိန်း 826 သိန်း 827 သိန်း 828 သိန်း 829 သိန်း 830 သိန်း 831 သိန်း 832 သိန်း 833 သိန်း 834 သိန်း 835 သိန်း 836 သိန်း 837 သိန်း 838 သိန်း 839 သိန်း 840 သိန်း 841 သိန်း 842 သိန်း 843 သိန်း 844 သိန်း 845 သိန်း 846 သိန်း 847 သိန်း 848 သိန်း 849 သိန်း 850 သိန်း 851 သိန်း 852 သိန်း 853 သိန်း 854 သိန်း 855 သိန်း 856 သိန်း 857 သိန်း 858 သိန်း 859 သိန်း 860 သိန်း 861 သိန်း 862 သိန်း 863 သိန်း 864 သိန်း 865 သိန်း 866 သိန်း 867 သိန်း 868 သိန်း 869 သိန်း 870 သိန်း 871 သိန်း 872 သိန်း 873 သိန်း 874 သိန်း 875 သိန်း 876 သိန်း 877 သိန်း 878 သိန်း 879 သိန်း 880 သိန်း 881 သိန်း 882 သိန်း 883 သိန်း 884 သိန်း 885 သိန်း 886 သိန်း 887 သိန်း 888 သိန်း 889 သိန်း 890 သိန်း 891 သိန်း 892 သိန်း 893 သိန်း 894 သိန်း 895 သိန်း 896 သိန်း 897 သိန်း 898 သိန်း 899 သိန်း 900 သိန်း 901 သိန်း 902 သိန်း 903 သိန်း 904 သိန်း 905 သိန်း 906 သိန်း 907 သိန်း 908 သိန်း 909 သိန်း 910 သိန်း 911 သိန်း 912 သိန်း 913 သိန်း 914 သိန်း 915 သိန်း 916 သိန်း 917 သိန်း 918 သိန်း 919 သိန်း 920 သိန်း 921 သိန်း 922 သိန်း 923 သိန်း 924 သိန်း 925 သိန်း 926 သိန်း 927 သိန်း 928 သိန်း 929 သိန်း 930 သိန်း 931 သိန်း 932 သိန်း 933 သိန်း 934 သိန်း 935 သိန်း 936 သိန်း 937 သိန်း 938 သိန်း 939 သိန်း 940 သိန်း 941 သိန်း 942 သိန်း 943 သိန်း 944 သိန်း 945 သိန်း 946 သိန်း 947 သိန်း 948 သိန်း 949 သိန်း 950 သိန်း 951 သိန်း 952 သိန်း 953 သိန်း 954 သိန်း 955 သိန်း 956 သိန်း 957 သိန်း 958 သိန်း 959 သိန်း 960 သိန်း 961 သိန်း 962 သိန်း 963 သိန်း 964 သိန်း 965 သိန်း 966 သိန်း 967 သိန်း 968 သိန်း 969 သိန်း 970 သိန်း 971 သိန်း 972 သိန်း 973 သိန်း 974 သိန်း 975 သိန်း 976 သိန်း 977 သိန်း 978 သိန်း 979 သိန်း 980 သိန်း 981 သိန်း 982 သိန်း 983 သိန်း 984 သိန်း 985 သိန်း 986 သိန်း 987 သိန်း 988 သိန်း 989 သိန်း 990 သိန်း 991 သိန်း 992 သိန်း 993 သိန်း 994 သိန်း 995 သိန်း 996 သိန်း 997 သိန်း 998 သိန်း 999 သိန်း 1000 သိန်း အရွယ်အစား
3,000 sqft (278 sqm)
1,000 sqft (465 sqm)
2 သိန်3းသိန်း4သိန်း5သိန်6းသိန်း7သိန်း 8 သိန်း9သိန်း 10 သိန်း 11 သိန်း 12 သိန်း 13 သိန်း 14 သိန်း 15 သိန်း 16 သိန်း 17 သိန်း 18 သိန်း 19 သိန်း 20 သိန်း 21 သိန်း 22 သိန်း 23 သိန်း 24 သိန်း 25 သိန်း 26 သိန်း 27 သိန်း 28 သိန်း 29 သိန်း 30 သိန်း 31 သိန်း 32 သိန်း 33 သိန်း 34 သိန်း 35 သိန်း 36 သိန်း 37 သိန်း 38 သိန်း 39 သိန်း 40 သိန်း 41 သိန်း 42 သိန်း 43 သိန်း 44 သိန်း 45 သိန်း 46 သိန်း 47 သိန်း 48 သိန်း 49 သိန်း 50 သိန်း 51 သိန်း 52 သိန်း 53 သိန်း 54 သိန်း 55 သိန်း 56 သိန်း 57 သိန်း 58 သိန်း 59 သိန်း 60 သိန်း 61 သိန်း 62 သိန်း 63 သိန်း 64 သိန်း 65 သိန်း 66 သိန်း 67 သိန်း 68 သိန်း 69 သိန်း 70 သိန်း 71 သိန်း 72 သိန်း 73 သိန်း 74 သိန်း 75 သိန်း 76 သိန်း 77 သိန်း 78 သိန်း 79 သိန်း 80 သိန်း 81 သိန်း 82 သိန်း 83 သိန်း 84 သိန်း 85 သိန်း 86 သိန်း 87 သိန်း 88 သိန်း 89 သိန်း 90 သိန်း 91 သိန်း 92 သိန်း 93 သိန်း 94 သိန်း 95 သိန်း 96 သိန်း 97 သိန်း 98 သိန်း 99 သိန်း 100 သိန်း 101 သိန်း 102 သိန်း 103 သိန်း 104 သိန်း 105 သိန်း 106 သိန်း 107 သိန်း 108 သိန်း 109 သိန်း 110 သိန်း 111 သိန်း 112 သိန်း 113 သိန်း 114 သိန်း 115 သိန်း 116 သိန်း 117 သိန်း 118 သိန်း 119 သိန်း 120 သိန်း 121 သိန်း 122 သိန်း 123 သိန်း 124 သိန်း 125 သိန်း 126 သိန်း 127 သိန်း 128 သိန်း 129 သိန်း 130 သိန်း 131 သိန်း 132 သိန်း 133 သိန်း 134 သိန်း 135 သိန်း 136 သိန်း 137 သိန်း 138 သိန်း 139 သိန်း 140 သိန်း 141 သိန်း 142 သိန်း 143 သိန်း 144 သိန်း 145 သိန်း 146 သိန်း 147 သိန်း 148 သိန်း 149 သိန်း 150 သိန်း 151 သိန်း 152 သိန်း 153 သိန်း 154 သိန်း 155 သိန်း 156 သိန်း 157 သိန်း 158 သိန်း 159 သိန်း 160 သိန်း 161 သိန်း 162 သိန်း 163 သိန်း 164 သိန်း 165 သိန်း 166 သိန်း 167 သိန်း 168 သိန်း 169 သိန်း 170 သိန်း 171 သိန်း 172 သိန်း 173 သိန်း 174 သိန်း 175 သိန်း 176 သိန်း 177 သိန်း 178 သိန်း 179 သိန်း 180 သိန်း 181 သိန်း 182 သိန်း 183 သိန်း 184 သိန်း 185 သိန်း 186 သိန်း 187 သိန်း 188 သိန်း 189 သိန်း 190 သိန်း 191 သိန်း 192 သိန်း 193 သိန်း 194 သိန်း 195 သိန်း 196 သိန်း 197 သိန်း 198 သိန်း 199 သိန်း 200 သိန်း 201 သိန်း 202 သိန်း 203 သိန်း 204 သိန်း 205 သိန်း 206 သိန်း 207 သိန်း 208 သိန်း 209 သိန်း 210 သိန်း 211 သိန်း 212 သိန်း 213 သိန်း 214 သိန်း 215 သိန်း 216 သိန်း 217 သိန်း 218 သိန်း 219 သိန်း 220 သိန်း 221 သိန်း 222 သိန်း 223 သိန်း 224 သိန်း 225 သိန်း 226 သိန်း 227 သိန်း 228 သိန်း 229 သိန်း 230 သိန်း 231 သိန်း 232 သိန်း 233 သိန်း 234 သိန်း 235 သိန်း 236 သိန်း 237 သိန်း 238 သိန်း 239 သိန်း 240 သိန်း 241 သိန်း 242 သိန်း 243 သိန်း 244 သိန်း 245 သိန်း 246 သိန်း 247 သိန်း 248 သိန်း 249 သိန်း 250 သိန်း 251 သိန်း 252 သိန်း 253 သိန်း 254 သိန်း 255 သိန်း 256 သိန်း 257 သိန်း 258 သိန်း 259 သိန်း 260 သိန်း 261 သိန်း 262 သိန်း 263 သိန်း 264 သိန်း 265 သိန်း 266 သိန်း 267 သိန်း 268 သိန်း 269 သိန်း 270 သိန်း 271 သိန်း 272 သိန်း 273 သိန်း 274 သိန်း 275 သိန်း 276 သိန်း 277 သိန်း 278 သိန်း 279 သိန်း 280 သိန်း 281 သိန်း 282 သိန်း 283 သိန်း 284 သိန်း 285 သိန်း 286 သိန်း 287 သိန်း 288 သိန်း 289 သိန်း 290 သိန်း 291 သိန်း 292 သိန်း 293 သိန်း 294 သိန်း 295 သိန်း 296 သိန်း 297 သိန်း 298 သိန်း 299 သိန်း 300 သိန်း 301 သိန်း 302 သိန်း 303 သိန်း 304 သိန်း 305 သိန်း 306 သိန်း 307 သိန်း 308 သိန်း 309 သိန်း 310 သိန်း 311 သိန်း 312 သိန်း 313 သိန်း 314 သိန်း 315 သိန်း 316 သိန်း 317 သိန်း 318 သိန်း 319 သိန်း 320 သိန်း 321 သိန်း 322 သိန်း 323 သိန်း 324 သိန်း 325 သိန်း 326 သိန်း 327 သိန်း 328 သိန်း 329 သိန်း 330 သိန်း 331 သိန်း 332 သိန်း 333 သိန်း 334 သိန်း 335 သိန်း 336 သိန်း 337 သိန်း 338 သိန်း 339 သိန်း 340 သိန်း 341 သိန်း 342 သိန်း 343 သိန်း 344 သိန်း 345 သိန်း 346 သိန်း 347 သိန်း 348 သိန်း 349 သိန်း 350 သိန်း 351 သိန်း 352 သိန်း 353 သိန်း 354 သိန်း 355 သိန်း 356 သိန်း 357 သိန်း 358 သိန်း 359 သိန်း 360 သိန်း 361 သိန်း 362 သိန်း 363 သိန်း 364 သိန်း 365 သိန်း 366 သိန်း 367 သိန်း 368 သိန်း 369 သိန်း 370 သိန်း 371 သိန်း 372 သိန်း 373 သိန်း 374 သိန်း 375 သိန်း 376 သိန်း 377 သိန်း 378 သိန်း 379 သိန်း 380 သိန်း 381 သိန်း 382 သိန်း 383 သိန်း 384 သိန်း 385 သိန်း 386 သိန်း 387 သိန်း 388 သိန်း 389 သိန်း 390 သိန်း 391 သိန်း 392 သိန်း 393 သိန်း 394 သိန်း 395 သိန်း 396 သိန်း 397 သိန်း 398 သိန်း 399 သိန်း 400 သိန်း 401 သိန်း 402 သိန်း 403 သိန်း 404 သိန်း 405 သိန်း 406 သိန်း 407 သိန်း 408 သိန်း 409 သိန်း 410 သိန်း 411 သိန်း 412 သိန်း 413 သိန်း 414 သိန်း 415 သိန်း 416 သိန်း 417 သိန်း 418 သိန်း 419 သိန်း 420 သိန်း 421 သိန်း 422 သိန်း 423 သိန်း 424 သိန်း 425 သိန်း 426 သိန်း 427 သိန်း 428 သိန်း 429 သိန်း 430 သိန်း 431 သိန်း 432 သိန်း 433 သိန်း 434 သိန်း 435 သိန်း 436 သိန်း 437 သိန်း 438 သိန်း 439 သိန်း 440 သိန်း 441 သိန်း 442 သိန်း 443 သိန်း 444 သိန်း 445 သိန်း 446 သိန်း 447 သိန်း 448 သိန်း 449 သိန်း 450 သိန်း 451 သိန်း 452 သိန်း 453 သိန်း 454 သိန်း 455 သိန်း 456 သိန်း 457 သိန်း 458 သိန်း 459 သိန်း 460 သိန်း 461 သိန်း 462 သိန်း 463 သိန်း 464 သိန်း 465 သိန်း 466 သိန်း 467 သိန်း 468 သိန်း 469 သိန်း 470 သိန်း 471 သိန်း 472 သိန်း 473 သိန်း 474 သိန်း 475 သိန်း 476 သိန်း 477 သိန်း 478 သိန်း 479 သိန်း 480 သိန်း 481 သိန်း 482 သိန်း 483 သိန်း 484 သိန်း 485 သိန်း 486 သိန်း 487 သိန်း 488 သိန်း 489 သိန်း 490 သိန်း 491 သိန်း 492 သိန်း 493 သိန်း 494 သိန်း 495 သိန်း 496 သိန်း 497 သိန်း 498 သိန်း 499 သိန်း 500 သိန်း 501 သိန်း 502 သိန်း 503 သိန်း 504 သိန်း 505 သိန်း 506 သိန်း 507 သိန်း 508 သိန်း 509 သိန်း 510 သိန်း 511 သိန်း 512 သိန်း 513 သိန်း 514 သိန်း 515 သိန်း 516 သိန်း 517 သိန်း 518 သိန်း 519 သိန်း 520 သိန်း 521 သိန်း 522 သိန်း 523 သိန်း 524 သိန်း 525 သိန်း 526 သိန်း 527 သိန်း 528 သိန်း 529 သိန်း 530 သိန်း 531 သိန်း 532 သိန်း 533 သိန်း 534 သိန်း 535 သိန်း 536 သိန်း 537 သိန်း 538 သိန်း 539 သိန်း 540 သိန်း 541 သိန်း 542 သိန်း 543 သိန်း 544 သိန်း 545 သိန်း 546 သိန်း 547 သိန်း 548 သိန်း 549 သိန်း 550 သိန်း 551 သိန်း 552 သိန်း 553 သိန်း 554 သိန်း 555 သိန်း 556 သိန်း 557 သိန်း 558 သိန်း 559 သိန်း 560 သိန်း 561 သိန်း 562 သိန်း 563 သိန်း 564 သိန်း 565 သိန်း 566 သိန်း 567 သိန်း 568 သိန်း 569 သိန်း 570 သိန်း 571 သိန်း 572 သိန်း 573 သိန်း 574 သိန်း 575 သိန်း 576 သိန်း 577 သိန်း 578 သိန်း 579 သိန်း 580 သိန်း 581 သိန်း 582 သိန်း 583 သိန်း 584 သိန်း 585 သိန်း 586 သိန်း 587 သိန်း 588 သိန်း 589 သိန်း 590 သိန်း 591 သိန်း 592 သိန်း 593 သိန်း 594 သိန်း 595 သိန်း 596 သိန်း 597 သိန်း 598 သိန်း 599 သိန်း 600 သိန်း 601 သိန်း 602 သိန်း 603 သိန်း 604 သိန်း 605 သိန်း 606 သိန်း 607 သိန်း 608 သိန်း 609 သိန်း 610 သိန်း 611 သိန်း 612 သိန်း 613 သိန်း 614 သိန်း 615 သိန်း 616 သိန်း 617 သိန်း 618 သိန်း 619 သိန်း 620 သိန်း 621 သိန်း 622 သိန်း 623 သိန်း 624 သိန်း 625 သိန်း 626 သိန်း 627 သိန်း 628 သိန်း 629 သိန်း 630 သိန်း 631 သိန်း 632 သိန်း 633 သိန်း 634 သိန်း 635 သိန်း 636 သိန်း 637 သိန်း 638 သိန်း 639 သိန်း 640 သိန်း 641 သိန်း 642 သိန်း 643 သိန်း 644 သိန်း 645 သိန်း 646 သိန်း 647 သိန်း 648 သိန်း 649 သိန်း 650 သိန်း 651 သိန်း 652 သိန်း 653 သိန်း 654 သိန်း 655 သိန်း 656 သိန်း 657 သိန်း 658 သိန်း 659 သိန်း 660 သိန်း 661 သိန်း 662 သိန်း 663 သိန်း 664 သိန်း 665 သိန်း 666 သိန်း 667 သိန်း 668 သိန်း 669 သိန်း 670 သိန်း 671 သိန်း 672 သိန်း 673 သိန်း 674 သိန်း 675 သိန်း 676 သိန်း 677 သိန်း 678 သိန်း 679 သိန်း 680 သိန်း 681 သိန်း 682 သိန်း 683 သိန်း 684 သိန်း 685 သိန်း 686 သိန်း 687 သိန်း 688 သိန်း 689 သိန်း 690 သိန်း 691 သိန်း 692 သိန်း 693 သိန်း 694 သိန်း 695 သိန်း 696 သိန်း 697 သိန်း 698 သိန်း 699 သိန်း 700 သိန်း 701 သိန်း 702 သိန်း 703 သိန်း 704 သိန်း 705 သိန်း 706 သိန်း 707 သိန်း 708 သိန်း 709 သိန်း 710 သိန်း 711 သိန်း 712 သိန်း 713 သိန်း 714 သိန်း 715 သိန်း 716 သိန်း 717 သိန်း 718 သိန်း 719 သိန်း 720 သိန်း 721 သိန်း 722 သိန်း 723 သိန်း 724 သိန်း 725 သိန်း 726 သိန်း 727 သိန်း 728 သိန်း 729 သိန်း 730 သိန်း 731 သိန်း 732 သိန်း 733 သိန်း 734 သိန်း 735 သိန်း 736 သိန်း 737 သိန်း 738 သိန်း 739 သိန်း 740 သိန်း 741 သိန်း 742 သိန်း 743 သိန်း 744 သိန်း 745 သိန်း 746 သိန်း 747 သိန်း 748 သိန်း 749 သိန်း 750 သိန်း 751 သိန်း 752 သိန်း 753 သိန်း 754 သိန်း 755 သိန်း 756 သိန်း 757 သိန်း 758 သိန်း 759 သိန်း 760 သိန်း 761 သိန်း 762 သိန်း 763 သိန်း 764 သိန်း 765 သိန်း 766 သိန်း 767 သိန်း 768 သိန်း 769 သိန်း 770 သိန်း 771 သိန်း 772 သိန်း 773 သိန်း 774 သိန်း 775 သိန်း 776 သိန်း 777 သိန်း 778 သိန်း 779 သိန်း 780 သိန်း 781 သိန်း 782 သိန်း 783 သိန်း 784 သိန်း 785 သိန်း 786 သိန်း 787 သိန်း 788 သိန်း 789 သိန်း 790 သိန်း 791 သိန်း 792 သိန်း 793 သိန်း 794 သိန်း 795 သိန်း 796 သိန်း 797 သိန်း 798 သိန်း 799 သိန်း 800 သိန်း 801 သိန်း 802 သိန်း 803 သိန်း 804 သိန်း 805 သိန်း 806 သိန်း 807 သိန်း 808 သိန်း 809 သိန်း 810 သိန်း 811 သိန်း 812 သိန်း 813 သိန်း 814 သိန်း 815 သိန်း 816 သိန်း 817 သိန်း 818 သိန်း 819 သိန်း 820 သိန်း 821 သိန်း 822 သိန်း 823 သိန်း 824 သိန်း 825 သိန်း 826 သိန်း 827 သိန်း 828 သိန်း 829 သိန်း 830 သိန်း 831 သိန်း 832 သိန်း 833 သိန်း 834 သိန်း 835 သိန်း 836 သိန်း 837 သိန်း 838 သိန်း 839 သိန်း 840 သိန်း 841 သိန်း 842 သိန်း 843 သိန်း 844 သိန်း 845 သိန်း 846 သိန်း 847 သိန်း 848 သိန်း 849 သိန်း 850 သိန်း 851 သိန်း 852 သိန်း 853 သိန်း 854 သိန်း 855 သိန်း 856 သိန်း 857 သိန်း 858 သိန်း 859 သိန်း 860 သိန်း 861 သိန်း 862 သိန်း 863 သိန်း 864 သိန်း 865 သိန်း 866 သိန်း 867 သိန်း 868 သိန်း 869 သိန်း 870 သိန်း 871 သိန်း 872 သိန်း 873 သိန်း 874 သိန်း 875 သိန်း 876 သိန်း 877 သိန်း 878 သိန်း 879 သိန်း 880 သိန်း 881 သိန်း 882 သိန်း 883 သိန်း 884 သိန်း 885 သိန်း 886 သိန်း 887 သိန်း 888 သိန်း 889 သိန်း 890 သိန်း 891 သိန်း 892 သိန်း 893 သိန်း 894 သိန်း 895 သိန်း 896 သိန်း 897 သိန်း 898 သိန်း 899 သိန်း 900 သိန်း 901 သိန်း 902 သိန်း 903 သိန်း 904 သိန်း 905 သိန်း 906 သိန်း 907 သိန်း 908 သိန်း 909 သိန်း 910 သိန်း 911 သိန်း 912 သိန်း 913 သိန်း 914 သိန်း 915 သိန်း 916 သိန်း 917 သိန်း 918 သိန်း 919 သိန်း 920 သိန်း 921 သိန်း 922 သိန်း 923 သိန်း 924 သိန်း 925 သိန်း 926 သိန်း 927 သိန်း 928 သိန်း 929 သိန်း 930 သိန်း 931 သိန်း 932 သိန်း 933 သိန်း 934 သိန်း 935 သိန်း 936 သိန်း 937 သိန်း 938 သိန်း 939 သိန်း 940 သိန်း 941 သိန်း 942 သိန်း 943 သိန်း 944 သိန်း 945 သိန်း 946 သိန်း 947 သိန်း 948 သိန်း 949 သိန်း 950 သိန်း 951 သိန်း 952 သိန်း 953 သိန်း 954 သိန်း 955 သိန်း 956 သိန်း 957 သိန်း 958 သိန်း 959 သိန်း 960 သိန်း 961 သိန်း 962 သိန်း 963 သိန်း 964 သိန်း 965 သိန်း 966 သိန်း 967 သိန်း 968 သိန်း 969 သိန်း 970 သိန်း 971 သိန်း 972 သိန်း 973 သိန်း 974 သိန်း 975 သိန်း 976 သိန်း 977 သိန်း 978 သိန်း 979 သိန်း 980 သိန်း 981 သိန်း 982 သိန်း 983 သိန်း 984 သိန်း 985 သိန်း 986 သိန်း 987 သိန်း 988 သိန်း 989 သိန်း 990 သိန်း 991 သိန်း 992 သိန်း 993 သိန်း 994 သိန်း 995 သိန်း 996 သိန်း 997 သိန်း 998 သိန်း 999 သိန်း 1000 သိန်း အနည်းဆုံး အိပ်ခန်း
အများဆုံး အိပ်ခန်း 1 bedrooms
Foreign Ownership Allowed SignUp Now
Receive Hot Properties Deals First
Find Properties 1000 X Faster Get the latest Property News
SignUp for Hot Property Alerts
Sorry, your e-mail looks typed in-correct.